Munamato kuna Saint Helena kuora mwoyo uye? Sunga rudo
Munamato kuSanta Helena Kusuruvara kwemurume uye kusambozvisiya, hazvimbofi zviri kure nekuve kweudyire kana kuti kusabatsira, chingave chikumbiro chekupererwa, asi kunoitwa kubva parudo uye kudiwa kwekudzoserwa.
Vazhinji vanofunga kuti munamato kutambisa nguva, asi chokwadi ndechekuti havazivi simba iro chiitiko ichi chine pamusoro pedu uye zvinotitenderedza.
Saint Helena aive mukadzi sevamwe vese vakatambura nekunetseka pasi pano munzvimbo dzakawanda ndosaka pasina mumwe ari nani kupfuura iye kusimudza minamato yedu, avo mukati memoyo unobatanidzwa, matiri isu tinokumbira mumwe munhu kubva kunongedzo Romance kana vaviri maonero.
1 Munamato kuSanta Helena
1.1 Namata kuna Saint Helena kushaya tariro murume uye usambomusiya
1.2 Munamato weSanta Elena kuti afunge nezvangu uye andidane
1.3 Munamato kuna Saint Helena kusunga rudo
2 Ini ndinofanira kuvhenekera kenduru kuti ndinamate here?
Vazhinji vanomuziva so Santa Elena kana saElena weConstantinople asi zita rake chairo ndiFlavia Julia Helena uye aive mukadzi wamambokadzi weRome uyo akanzi Musande weCatholic, Orthodox neLutheran Church.
Musande uyu ndiye akaunza Emperor munyika iye akapa rusununguko kuvanhu vechiChristian mune iyo yaive refu yechitendero chitambudzo munhoroondo.
Elena, achirambwa nemurume wake airarama hupenyu hutsvene huzere nekurwadziwa uye nekutambudzika nekuda kwerudo rusina kuzombodzoserwa.
Uku kushungurudzwa kwaSanta Elena kwakatora makore gumi nemana imomo aigara akasiyiwa uye akaiswa parutivi iye achiona murume wake achifara nemumwe mukadzi pasi peimba imwechete.
Aive akafira kutenda uyo akazova muenzaniso wesimba uye rubatsiro kune vanhu vazhinji vanogona kuzviwana vari mumamiriro akafanana.
Namata kuna Saint Helena kushaya tariro murume uye usambomusiya
Anokudzwa Saint Helena, mutsvene wevadi, ini ndauya kuzokukumbira kuti undipe nemutsa wake mukuru, izvo (zita remunhu) usambondisiya, usatarise chero mumwe mukadzi, kubasa, mumugwagwa uye chero pandinoramba ndichifunga nezvangu, mweya wemuviri nemweya we (...) huya, nekuti ini ndinokudaidza, ini ndinoshandura Hunhu, ini ndine simba pamusoro pako.
Santa Elena, ane simba murudo, usamupa rugare rwepfungwa, kuti haasiye pfungwa dzake, kuti zita rangu rinomutambudza uye harimusiyi iye ega, kuti haazombotsvakazve mamwe miromo chete yangu, kuti vese venyama vanoishuvira mumwe akafa. Mukadzi, chete neni ndinogona kunzwa kufara nekuti ndinayo yakasungirirwa.
Oh Saint Elena, uri kuenda kuzondibatsira kukunda mwoyo wako zvakare, tishe kudada kwako nehunhu, mira kuumbika, rega (...) uzive kuti ndezvangu, kurasikirwa nemoyo murefu kana zviri nemumwe, kunyepedzera uye Tariro iri murudo rwangu kuelekea (...).
Wakafarira here munamato une simba weSanta Helena kuti uore mwoyo murume uye usambomusiya?
Kugara pasi pedenga remba nemumwe mudiwa asingatipe chero kugadzikana kwepamoyo ndeimwe yemasimba akasimba uye akajairwa anorarama mumisha nhasi.
Idzo hukama mukati umo rudo neruchiva zvakasiya mubhedha wepedyo wehukama kuti ikozvino ive nzvimbo inotonhora uye isina kugadzikana apo kusagadzikana uye kusagadzikana ndiko kunoitika munharaunda dzese dzeimba, kunyorera zvese zvine simba rakaipa. Ivo vanosvibisa zvakasikwa.
Mune zviitiko izvi kupi munamato unova kupukunyuka kwedu chete Ipapo ndipo minamato kuna Saint Helena kunova ine simba.
Munamato weSanta Elena kuti afunge nezvangu uye andidane
Hiri mbiri yeSanta Helena, kuti wakaenda kuCalvari ukauya nezvipikiri zvitatu.
Imwe waakapa kumwanakomana wako Constantine, imwe ukaikanda mugungwa, kuti vafambisi vane hutano, uye yechitatu vanoitakura mumaoko ako anokosha.
Saint Helena, ini (zita rako) ndinokumbira kuti undipe iyi yechipiri chipikiri, kuti ndiise iyo mumoyo we (zita remudiwa wako), kuti ini handina rugare kana rugare chero ini ndisingauye kuzogara, Usandiroore uye nditaure rudo rwako rwechokwadi.
Midzimu yechiedza chinovhenekera mweya, inovhenekera moyo we (zita remudiwa wako), zvekuti anogara achindirangarira, achindida, achindinamata uye achindishuvira, uye chero chaanondipa, chinotungamirwa nemasimba ako, Saint Helena, dai ari muranda werudo rwangu.
Runyararo uye kuwirirana hakuna kusvika iye auya kuzogara neni, uye agare neni, ave mudiwa wangu, ane rudo uye akashata. Kutendeka kwandiri sembwa, nyoro segwayana uye inokurumidza semutumwa, iyo (zita remudiwa wako) inouya kwandiri nekukurumidza, pasina chero simba renyama kana remweya rinogona kumumisa.
Dai muviri wake, mweya nemweya zvingauya nekuti ini ndinoshevedza uye ndimukurudzire uye ndimutonge. Chero bedzi asingauye munyoro uye achidakarira, akazvipira kune wangu rudo, hana yake haitomupa rugare. Kana akanyepa, kana anditengesa, ngaarege ruregerero nekuita kuti nditambure.
(Zita remudiwa wako) Huya nekuti ndinokudana, ndinokuraira, kuti udzokere kwandiri (zita rako), nemasimba eSanta Helena uye nengirozi dzinochengeta.
Saka ngazvive saizvozvo, uye zvichave zvakadaro!
Nokutenda minamato yese ine simba uye munamato wekuti Saint Elena afunge nezvangu uye andidane ndizvo zvakafanana.
Kuita izvi uye neminamato yose kubva pamoyo ndiyo nzira yakanakisa sezvo kunzwa uye kushushikana kwatinochengeta mukati medzidziso yemweya yedu kuchifumurwa.
Bvunza iye kuti afunge nezvangu haisi nzira yekuremekedza pfungwa dzemumwe munhu asi inzira ye chengetedza kubatana muhukama.
Masimba akanaka atinopihwa mushure mekuita munamato zvirokwazvo anobatsira kugadzirisa nharaunda munharaunda medu.
Kukumbira Santa Elena kuti atibatsire kuitira kuti iye munhu akasarudzika arege kumira kufunga nezvedu kusvika pakuve nekudiwa kwekugadzira imwe nzira kunyangwe iri kuburikidza netambo yerunhare ndeimwe yeminyengetero inonyanyo kunamatirwa nhasi.
Imba inotanga kuzadza nerunyararo uye zvishoma nezvishoma mamiriro ezvinhu anotanga kuita mhinduro yatakanga takamirira.
Munamato kuna Saint Helena kusunga rudo
Ah zvakanaka Empress Santa Elena, nhasi ndauya kwauri ndizere nekutenda uye netariro, kuti undibatsire kupora (zita remunhu) wandinoda, iwe unoziva ramangwana uye razvino, ndinokumbira kuti uone hupenyu hwangu, ita ( ...) Fungisisa uye ziva iko kukanganisa.
Wakakomborerwa Saint Elena, nengoni dzako dzisingaperi, ndibatsire kuti ndiwane zororo rekukurumidza mumoyo mangu, kuti ndiwane munhu wandinoda, iwe unoziva manzwiro angu akachena uye ari pachokwadi, nyorovesa mwoyo wako kuti uzive kukosha kwerudo rwangu.
Saint Elena, amai vane muenzaniso, muKristu akakwana, (…) haazi munhu wekutsamwa, anovhenekesa pfungwa dzake, anoita kuti afungezve, nerudo zvinhu zvese zvinogona kukurirwa, kure nemifungo yakaipa inovhiringidza pfungwa dzake zvakanyanya, aive asiriye, aenda na Wechidiki akaratidzirwa munhu, anodzoka kumba (...), isu takamirira iwe.
Oh Mutsvene Elena wedanda, ndinoziva kuti iwe unogona kuita zvese, haundisiye, teerera inzwi rangu, izwi reminamato yangu uye kumbira chikumbiro changu.
Uyu munamato Santa Elena kusunga murume kunokurudzirwa mumamiriro ezvinhu apo mumwe wevanhu vaviri vari muhukama vanofunga kusiya kana kutaura kumwe kusahadzika kunotanga kuputsa nheyo dzakasimba dzehukama hunounza kusagutsikana, kurwa, kusawirirana uye kusawirirana mumba. .
Ndozvinoita munamato wekunyora nezve, kuti mumwe munhu anongoerekana asarudzika, anogara nesu asi asingapesani nezvaanoda asi achivimba kuti kugara ndiyo yakanakira sarudzo nekudaro achinja zano rekubva pamba .
Ini ndinofanira kuvhenekera kenduru kuti ndinamate here?
Tinokurudzira izvozvo vhenekera kenduru chena pakutanga kana kupera kwemunamato weSanta Helena Kusiya tariro uye kusungira rudo.
Kenduru chiratidzo chekutenda. Isu tiri kutenda uyu musiki ane simba nerubatsiro rwake rwese muhupenyu hwedu,
Namata nekutenda kwakawanda uye nerudo rwakawanda.